Nbudata ihe nkiri Live Apk maka gam akporo [ngwa] - Luso Gamer
N'oge ndị ọkachamara na-enwe mmasị ịkwado faịlụ vidiyo n'elu ọtụtụ sava. Nke bụ nzuzo anaghị akwado ma ọ bụ chepụta ọdịnaya ozugbo. Agbanyeghị, ugbu a ijikọ akụrụngwa ntụrụndụ kacha akpọrọ Drama Live Apk ga-enyere aka ịkwanye ntụrụndụ na-adịghị agwụ agwụ.
Naanị ihe ha chọrọ ime bụ naanị budata ụdị ọhụrụ Ngwa IPTV faịlụ si ebe a. Ozugbo ha mechara na nbudata faịlụ, ugbu a wụnye ndị nọ n'ime smartphone Android. Mgbe usoro ahụ mechara, ugbu a malite ngwá ọrụ ahụ ma nwee obi ụtọ ọdịnaya na-adịghị agwụ agwụ.
Usoro ojiji dị ntakịrị aghụghọ n'ihi na ọ nwere ike ịchọ ọtụtụ URL ma ọ bụ faịlụ. Mgbe itinye faịlụ ndị ahụ na URL ga-eme ka ndị ọrụ gam akporo nwee ọ enjoyụ ọdịnaya dị elu. N'ihi ya, ị na-achọ ngwá ọrụ yiri nke ahụ wee wụnye Drama Live App.
Gịnị bụ Drama Live Apk
Drama Live Apk bụ ngwa ọrụ ntụrụndụ ndị ọzọ na-akwado na ntanetị nke na-enyere ndị na-akwado ya aka. Ka ịkwanye ihe nkiri na-adịghị agwụ agwụ, usoro ihe nkiri, ihe nkiri TV, redio, FM na ndị ọzọ. Naanị ihe ha chọrọ ime bụ naanị nbudata ụdị ngwa ngwa Apk kachasị ọhụrụ.
Anyị ahụla ọtụtụ nyiwe ndị ọzọ ama ama n'ịntanetị. Nke na-ewu ewu ma na-ewu ewu n'etiti ndị hụrụ ntụrụndụ n'anya. Mana ịnweta nyiwe ndị ahụ chọrọ ndenye aha na ikike pro. Ọ gwụla ma onye ọrụ emechara nke ọma n'ịzụta ndenye aha.
Ndị Fans enweghị ike ịnweta dashboard isi. Ọnụ ego kwa afọ maka ndenye aha nwere ike karịa narị narị dollar. Nke ahụ dị oke ọnụ na enweghị ike ịkwụ ụgwọ maka nkezi Fans. N'ihi ya, na-atụle ohere n'efu na dị mfe n'ebe ahụ ọtụtụ weebụsaịtị ndị ọzọ nwere ike iru.
Nke na-enye ohere ịnweta isi ọdịnaya ozugbo n'efu. Mana n'okwu ndị bụ isi, nyiwe dị otú ahụ nwere ike ịrịọ maka ikike na-enweghị isi. Ọ gwụla ma ndị ọrụ agaghị eme nke ọma n'ikwe ka ikike ndị ahụ, ọ gaghị ekwe omume ịnweta ọdịnaya. N'ihi ya, na-atụle nche ebe a anyị wetara Drama Live Android.
aha Ihe nkiri Live
Aha ngwugwu com.sneig.livedrama
Nke ahụ bụ free download si ebe a na otu click nhọrọ. Ihe niile ndị fan chọrọ ime bụ naanị budata ngwa ngwa Apk kachasị ọhụrụ na webụsaịtị anyị. Wee tinye ya n'ime android smartphone na mfe nweta isi dashboard.
Mgbe anyị na-enyocha ngwá ọrụ ahụ, anyị hụrụ na ọ dị mfe na enyi na enyi. Ngwa ahụ anaghị enye vidiyo ozugbo n'ime dashboard isi. Ihe ngwa a na-enye bụ ịnweta ozugbo na igbe njikọ isi. Ugbu a itinye URL ahụ ga-enye ndị ọrụ ohere ịnweta vidiyo.
Cheta na e nwere atọ dị iche iche isi mmalite na-agbakwunyere. Nhọrọ nke mbụ chọrọ koodu FG nwere ọnụọgụ bụ eziokwu. Ọ bụrụ na onye ọrụ enweghị ihe ịga nke ọma na ịnweta koodu FG mgbe ahụ ọ nwere ike ịkụnye URL M3U n'ụzọ dị mfe. Nke ahụ dị mfe ịnweta site na isi panel.
N'agbanyeghị nke ahụ, ndị na-ekiri enweghị ike nweta ma koodu na URL. Nhọrọ ikpeazụ enyere n'ime ngwa a bụ nhọrọ nbanye Xtream ozugbo. Naanị tinye nzere nbanye wee nweta ọdịnaya adịchaghị mma na-enweghị mgbochi ọ bụla.
Ngwá ọrụ ahụ bụ n'efu iji budata na webụsaịtị anyị ọ nweghịkwa mgbe achọrọ ndebanye aha ma ọ bụ ndenye aha. Naanị tinye ya n'ime ama ma nwee ọmarịcha ihe nkiri, ihe nkiri, ihe nkiri TV na redio na-akparaghị ókè. Ọ bụrụ na-amasị gị pro atụmatụ nke ngwá ọrụ ahụ wụnye Drama Live Download.
Ịwụnye ngwa na-enye nhọrọ atọ bụ isi.
Tinye koodu FG ma nụ ụtọ ọdịnaya na-adịghị agwụ agwụ.
Enwere ike ịnweta ọkpụkpọ M3U maka ị nweta vidiyo ozugbo.
Ndị na-enweghị ike nweta nzaghachi dị mma site na nhọrọ abụọ ahụ
Arịrịọ ka ịbanye ozugbo na Xtream site na iji nzere nbanye ziri ezi.
The ngwa interface dị mfe na mobile-enyi na enyi.
Otu esi ebudata Drama Live Apk
Enwere ike ịnweta ngwa IPTV site na Ụlọ Ahịa Play. Mana n'ihi isi okwu ụfọdụ, e debere ya na ngalaba mgbochi. Nke pụtara na ọ bụ naanị ekwentị android tozuru oke ka a na-ahapụ ka ibudata faịlụ Apk kacha ọhụrụ.
Yabụ kedu ihe ndị ọrụ mkpanaka kwesịrị ime n'ọnọdụ dị otú a, mgbe ha enweghị ike ịnweta faịlụ? N'ihi ya, n'ụdị ọnọdụ a, anyị na-akwado ndị ọrụ ahụ ka ha gaa na webụsaịtị anyị ma nwee ọ enjoyụ vidiyo na-enweghị ngwụcha. Naanị pịa bọtịnụ nbudata nbudata wee nweta faịlụ Apk ngwa ngwa.
Ngwá ọrụ anyị na-enye ebe a bụ naanị nke mbụ. Nke pụtara na ndị na-akwado ntụrụndụ nwere ike ibudata ma wụnye ngwa ngwa n'enweghị nchegbu. Cheta tupu ịnye ngwa n'ime ngalaba nbudata, anyị etinyelarị ya n'elu ekwentị dị iche iche na enweghị ike ịchọta nsogbu ọ bụla n'ime.
A na-ebipụta ọtụtụ ngwa ndị ọzọ metụtara ntụrụndụ ebe a na webụsaịtị anyị. Ka inyochaa ngwa ngwa biko soro njikọ ndị a. Kedu ndị bụ SplikTV Apk na Wovie TV Apk.
N'ihi ya, ị na-elekwasị anya ma na-achọ isi iyi dị n'ịntanetị. Nke ahụ na-enye ndị Fans ohere ịkwanye vidiyo adịchaghị agwụ agwụ gụnyere redio n'efu. Mgbe ahụ, anyị na-atụ aro ndị download na wụnye ọhụrụ version of Drama Live Apk.
Categories Entertainment, Apps Tags Ihe nkiri Live Android, Ihe nkiri Live Apk, Ngwa Drama Live, Ihe nkiri Live Download, Ngwa IPTV Mail igodo